Talaado, Nofeembar 9, 2021 Isniin, November 22, 2021 Thomas Brodbeck
Ma hubo sababta qofkasta uu u furayo makarafoonkiisa laptop-ka oo uu u qabanayo shaqo xun oo ka sheekeynaysa fiidiyoow xirfad leh ama raad maqal ah ganacsigooda. Ku darista cod xirfad leh iyo dhawaajiste waa qaali, waa fududahay oo hibada meesha taalaa waa mid cajiib ah. BunnyStudio In kasta oo laga yaabo inaad damacsan tahay inaad raadsato qandaraasle lambar kasta oo tilmaamo ah, BunnyStudio waxaa si toos ah loogu bartilmaameedsanayaa shirkadaha u baahan caawimaad maqal xirfadeed leh xayeysiintooda maqalka, Podcasting,
Liistada Hubinta Waxyaabaha Websaydhka: 67 Ugu Dambeyn Waa Inay Ku Dhacdaa Goobtaada
Jimco, Oktoobar 2, 2020 Axad, Maarso 7, 2021 Douglas Karr
Cajiib. Waan jeclahay marka qof uu qorsheeyo liis hubineed oo ku saabsan infographic kaas oo labadaba fudud oo wax ku ool ah. Dib-u-eegista Marti-gelinta Websaydha ee Boqortooyada Midowday (UK Web Review Review) waxay qaabeeysay xogtan si ay u horumariso liistada astaamaha ay rumeysan yihiin in lagu soo daro meherad kasta oo 'joogitaanka khadka tooska ah. Si ganacsigaagu ugu guuleysto khadka tooska ah waxaad u baahan tahay inaad hubiso in websaydhkaagu ka kooban yahay muuqaal buuxo! Waxaa jira faahfaahin badan oo yar yar oo sameyn kara dhammaan farqiga - labadaba xagga bixinta macaamiisha